Malunga nathi - Foshan Shunde Ruima Machinery Co., Ltd.
Foshan Shunde Ruima oomatshini Co., Ltd.
RUima oomatshini Co., Ltd. Yasekwa ngonyaka ka-2000, inabasebenzi abangaphezulu kwama-300, kubandakanya amagcisa angama-50 e-R & D, abaphathi abali-10, abasebenzi abathengisayo abangama-40 kunye nabangama-20 benkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa. Indawo entsha yomzi-mveliso yeemitha zesikwere ezingama-35000 isakhiwa, iRuima ngumatshini osebenza ngomthi kwaye yabona ishishini elidibanisa uphando kunye nophuhliso, uyilo, imveliso kunye nentengiso.
Ngokwemveliso kunye nemeko yezityalo zabathengi basekhaya nabangaphandle, sibonelela ngezisombululo zemveliso yokusika iinkuni, ukusika kweenkuni, ukususwa komphetho, ukuchuba komphetho njalo njalo. Ukubonelela abathengi ngoomatshini abenziwe ngezixhobo basekhaya kunye nezixhobo zokumiliselwa kunye nokusetyenziswa kwezixazululo, ezinze kwiLokishi yaseLunjiao, iSithili saseShunde, kwiSixeko saseFoshan kwiSixeko samazwe onke esisebenza ngemithi esisiXeko esiyiMboniso yoomatshini abakhulu eChina.
Emva kweminyaka engaphezulu kwama-20 yokuqokelela, inkampani iye yakhula yaneva kushishino lweplate-uhlobo, iinkuni eziqinileyo kunye neesarhi zeprofayili yealuminium, kwaye isebenze ngokusondeleyo namashishini ahlukeneyo awaziwayo. Iimveliso zayo zibandakanya: iincakuba zesetyhula, iimela zokusika, iimela zokukrola, izijikelezo ezijikelezayo, iincinci ezincinci, iisarha zebhendi, iisarha zesakhelo, njl.Umatshini: udidi lwesakhelo somfanekiso, ungene kwimishini emininzi yesarha kunye nePlank yemigca yemveliso emininzi, .zithunyelwe kumzantsi-mpuma I-Asiya, ukuza kuthi ga ngoku, sinearhente ezili-159 elizweni, iimveliso zethu zithunyelwa eMelika, eAfrika nakwamanye amazwe.
Kwiminyaka yakutshanje, siye zaphuhliswa ngempumelelo iincakuba iidayimani isarha, ezo abaxhomekekanga kwamanye amazwe, nokubonelela abathengi kunye iincakuba iidayimani kunye nezixhobo kunye nokusebenza kweendleko super, lukhuni aphezulu, ngakumbi ukunxiba ukumelana kunye nobomi inkonzo ixesha elide.
Oko kwasekwa, oomatshini baseRuima babambelela kubuchule "bokwenza isarha enye, ukwenza eRuima" injongo, esekwe kumgangatho wemveliso, inkonzo elungileyo yokholo kwishishini, ukufunxa itekhnoloji yemveliso ekhokelayo kwihlabathi, ukuphucula inkqubo yemveliso, ukuphucula indlela kunye indlela yenkonzo, iya kuba nakho ukunceda ishishini lakho liqale!
Cnc Machine Izixhobo, Cnc Bits, IKhabhinethi yesixhobo somthi, Iibhodi zendlela ze-CNC, Izixhobo zikaRobin Wood, IsiCwangciso seKhabhinethi sezixhobo zeKhabhinethi,